Ukuphucula amandla ehostela ekhaya
Kwinqaku lethu "Ukuphucula amandla ehostela ekhaya" siya kukuxelela indlela unokukhusela ngayo indlu okanye indlu yakho kwiimpembelelo ezahlukeneyo kunye neengxaki. Akuyena wonke umntu owaziyo ukucoca indlu yamandla nokuphucula. Ukusuka endlwini kwindawo esondeleyo kunceda ukutshala imithi yezithelo, kuzo zonke izilwanyana ezinika ubomi zokuhamba kwamandla. Amandla okubhubhisa alawulwa ngumthi omnye ojongene nomnyango wokungena. Ukwandisa nokuphucula amandla asebenzayo kwindlu kunokunceda izityalo zendlu. Zifanekisela ubomi kwaye zivuselele umoya kwigumbi. Ukukhuthaza amandla kumagumbi endlu unokusebenzisa izityalo. Kwigumbi lokulala awukwazi ukugcina izityalo zasemaphandleni, kufuneka zibekwe bhetele kwamanye amagumbi. Ukususela kwizityalo ezigulayo nezomileyo, kufuneka uzilahle ngexesha elifanelekileyo, zonke izityalo kufuneka zilungiswe kakuhle.
Ingaphakathi lihlobisa indlu yakho ngezithombe zabantu abasondeleyo nabathandekayo
Ukuba unikwe isipho, kwaye awuyithandi, okanye umntu onike lona kuwe, awunelisekanga, kufuneka ulahle isipho esinjalo.
Ukusuka kwiindonga kufuneka uthathe imifanekiso ethwala umbala ombi. Imifanekiso kwimidwebo iyakuchaphazela ukuphela kwezindlu zokuhlala. Kufuneka uthenge ezo zemizobo, ezibonisa imihlaba, kukho ukudweba ngamanzi, kungekhona amafosholo, amandla okuwa kwamandla kakhulu. Isebenza kakuhle kumntu xa umfanekiso ubonisa iintaba, zinokuxhasa ngexesha lomsebenzi, zifanekisela ukuphakama. Xa uthenga iimifanekiso, zama ukuphulaphula iimvakalelo zakho, nokuba uyavuya nalo mfanekiso. Ungalali phantsi kwe-candle okanye phantsi komfanekiso onzima. Zonke izinto ezigqithiseleyo ngaphaya kombhede - iikhabinethi ezixhoma okanye i-shelf ziphazamisa ukuhamba kakuhle kwamandla kwaye ngexesha lokulala azivumeli ukuba umzimba uphinde ufike.
Gcina amandla angileyo endlwini kwaye uphucule. Ukusuka kwinqanaba lokujonga i-feng shui, iipasesi ezinesiseko esibanzi esisezantsi kunye nokunciphisa phezulu ziyakuthandeka kakhulu kunezo eziya phezulu. Ezi zivalo ziqokelela amandla amnandi, kwaye xa ubeka i-crystals okanye iimali zesiTshayina ezixhunyaniswe ne-ribbon kwi-vase, ngokukhethekileyo zibomvu, ngoko amandla amnandi aya kunyuka ngamaxesha amaninzi.
Ngenxa yokubonakalisa, izibuko ziphindwe kabini amandla okuhamba. Phantse kwisibuko, faka isimboli samandla, okwangoku ufuna. Ukuba ungenalo uthando, faka iirase, iintliziyo, iimpawu zothando. Ngenhlanhla, faka i-horsehoe, kunye nezityalo zonyango, iimveliso ze-crystal ziya kuqinisa impilo yakho. Ubutyebi buya kukhwela umthi wemali, i-goldfish, ibhanki yeebhanki, iimali zemali. Isimboli sobuqaqawuli siya kuba yimida, idiploma, idiploma, i-nut okanye ukhozi.
Ukuba unento eqhubekayo kwimicimbi yakho okanye into engekho kakuhle, zama ukwenza ukulungiswa kwakhona kwindlu, ngoko ubeka onke amandla angamaqhosha. Kodwa ukuba awunaso ixesha lokuhlambalaza kunye ne-rearrangement yefenitshala, ngoko ngokuphindaphindiweyo ukudibanisa i-ribble, kuya kuzisa amandla endlwini yakho, ukuze rhoqo kunokwenzeka ukucoca kwindlu.
Xa usuqeshwe kwi shishini, qhawula ieshefu kwiifubthi zabadwebi kunye nakwii-closets, ukulahla izinto ezingaphezulu. Ukuba awunxibe into engaphezu konyaka, kungcono ukuba uyingxenye yale nto, izinto ezindala zinamandla amakhulu, kwaye into entsha iya kuza kwindawo entsha.
Ngokuqhelekileyo ventilate indlu yakho, vula ikhethini kwaye uvule iifestile, kwaye ngisho nasebusika, ke endlwini yakho uya kuqala amandla ombane nelanga. Qaphela ukukhanya kakuhle kwendlu yakho. Ukukhanya kukhangela ubungqina obuhle, kuyimfuneko ukuba akukho zimbombo zomnyama kule ndlu. Kufuneka unakekele ukukhanyisa emnyango kunye neendawo. Amandla okuphila ahamba ngamagumbi amnyama kunye namaqela anamandla.
Imithombo yombane owonakalisayo ingaba ngumgwaqo omkhulu oxakekileyo, imigqa yamandla, iikona ezibukhali kwezinye izakhiwo. Emva koko uya kufuna iimbonakaliso - iindlela ezikhethekileyo ze-feng shui - iimfestile, iintsimbi zomoya, umculo womoya, isibuko se-Bagua. Unokuzilungelelanisa iidiski zekhompyutheni ezingadingekile njengemibala yebala.
Ekhaya kufuneka ukuba ube yindawo apho ungafunda khona, ukhulule, ukhulule kwaye ucamngce. Kufuneka ubenzele indawo enjalo, apho unokufumana ukuphumla ngokwakho.
Ngosizo lwekhandlela, yenza isithethe sokucoca indlu yakho, ngenxa yoko, uthenge ikhandlela ebandleni kwaye ujikeleze umgama wendlu yakho kunye nekhandlela elikhanyayo, uqala emnyango uze uqedele umnyango. Lapho kukho amandla angenamandla, ikhandlela iqalisa ukupapa kunye ne-chum. Hlanza uphinde uthuthukise amandla endlu ngamanzi
Abantu abahlukeneyo basebenzisa amanzi kwimikhosi yokomoya, amanzi anendlela enamandla yokuhlanjululwa. Ngokwemeko yamanzi, amagunya okuhlambulula amanzi asetyenziswa. Iingcali zenzululwazi ziye zafakazela ukuba amanzi adlulisa aze aqokelele ulwazi-ezingalunganga kunye neengcinga ezilungileyo, iimvakalelo kunye namazwi. Ngomlinganiselo othile, umntu uyakwazi ukuhlawula amandla akhe ngamanzi.
Okhokho bethu bayazi ukuba amanzi ahlambulula iipropati, kwaye wayesebenzisa ukutsala uxolo noxolo kwihostela kunye nokucima i-negative accumulated. Akunamanzi alula angasetyenziselwa ukucoca.
Kwiveki ye-Epiphany, amanzi e-Epiphany athathwe kwimithombo ekhethekileyo engcwele okanye eetempileni. I-particle ehlawulweyo yamanzi idlulisela kwaye iyithwala yonke loo nkcazelo, kwaye ikholelwa ukuba ebhaptizweni onke amanzi, nakwii-cranes ziba ngcwele. Ukuba akukho ndlela yokuqokelela amanzi entwasahlobo engcwele, ngoko kunokwenzeka ukuba uthathe uze ugcwalise iitank ebusweni. Amanzi anjalo angagcinwa kwindawo epholileyo ebanzi ngokwaneleyo. Ingasetyenziselwa ukucoca indlu, engeza kwisiselo.
Indlela yokuhlawula amanzi?
Wonke umntu unako ukuhlawula amanzi ngenye indlela. Kodwa unokwenziwa ngumntu onempilo, kuba amanzi athabatha yonke ingcaciso kumntu, kwaye oku akuyi kuhlanganisa iimpawu zokuphulukisa kuyo. Imirhumo, kuphela ecocekileyo, amanzi, ethathwa kumthombo wendalo ococekileyo, okanye udlula kwicebo elifanelekileyo. Akunakwenzeka ukutshisa amanzi ahlawulwe ngaphezu kwama-degrees ama-35, ngenxa yokuba ukushisa kwawo iipropati ezincedo zilahlekile.
Sihlawula amanzi ngesiliva. Kwisitya samanzi, sibeka into yesilivere kwaye siyishiye imini. Ngomhla siya kufaka ibhotile entendeni enye, kwaye ngesinye isandla siza kuqhubela kule ngxube, senze ukudlula, njengokungqongqoza emoyeni kule ngxube. Kwiingcamango zethu sithetha ukuba zeziphi iimpawu ezifunekayo amanzi, ukunika amandla, ukuhlambulula umzimba wethu okanye ukuphilisa eso sifo. Siphuza amanzi ahlawulweyo kwisisu esingenalutho kusasa ngo-150 ml nangaphambi kokuphupha nge-100 ml, kwaye ke emva kweentsuku ezingama-40. Ngomhla, amanzi okuphulukisa alahlekelwa iipropati zayo, ngoko kufuneka uhlaziye amanzi amasha imihla ngemihla.
Aeration yamanzi. Le ndlela yokwenza i-yoga. Ngentsasa, amanzi azaliswe nge-oksijeni, phambi kwefestile evulekileyo, ithululelwa kwiglasi enye ibe ngamanye amanzi abilisiwe angama-35 okanye ama-42 amaxesha. Emva koko basela onke amanzi ngamancinci amancinci. Kukholelwa ukuba amanzi ayenzileyo awonakalisa i-microflora ye-pathogenic emathunjini, athatha izifo zesigca esiswini kwaye agcwalise umzimba ngamandla.
Ukugqithiswa kwamanzi. Phala amanzi kwiitya ezivulekileyo uze ushushu ukufikelela kuma-degree angama-90. Emva koko gubungela ngesiqhekeza uze upholise kwiidridi ezingamashumi amabini. Ukuba usebenzisa kwisisu esingenalutho ½ indebe yamanzi aphantsi, ngoko ukhawuleza iinkqubo zokuxilisa emzimbeni. Amanzi anjalo afanelekile ukutshisa kunye namanxeba, ukunciphisa ukutshaya kwezinsini.
Unako ukuhlawula amanzi ngamandla alanga. Siyifake kwi-ceramic okanye i-glassware kwaye siyifake kwindawo enelanga ngeeyure ezintathu. Amanzi azaliswe ngamandla alanga angasetyenziswa kumagumbi amnyama.
Unako ukuhlawula amanzi ngamanzi omsi, kufuneka ushiye isitya samanzi kwifestile okanye kwi-balc for 3 hours. Amanzi adonsa amaphupha aphulileyo, afanele ukucoca izindlu zokulala.
Amanzi anokuhlawulwa ngekristart ye-quartz. Sifaka i-crystal ye-quartz kwisitya esinokubonakalayo ngamanzi kwiiyure ezingama-24, kwaye ufake isitya kwilanga. La manzi afanelekile ukuphulukisa iinjongo kunye nokunisela izityalo zangaphakathi.
Ngaphambi kokucima amagumbi, funda icebo:
"Makuzaliswe amanzi ngoMoya, kwaye le ndlu mayiyihlambulule ngamandla alo manzi. Njengoko amanzi aphilisa kunye nokuvuselela, kwangathi le gumbi lingaphiliswa kwaye lihlaziywe, ngoko makube njalo. "
Yiya ekhoneni elingasempuma yegumbi ngamanzi. Kwinqanawa ngamanzi, nciphise ihlumela lomthi uze ufefe izinto kunye neendonga, uthi ngokwakho okanye ngokuzwakalayo: "Amanzi, hlamba igumbi licoceke, likhanyise. Amanzi, hlambulula indawo ngothando kunye nokukhanya. Hamba ngokufafaza indlu ngenyameko.
Ngoku siyazi indlela yokuphucula amandla asekhaya ekhaya. Ukuba amaxesha angama-7 afefe iindawo ezinokuhlala ekhaya, ziya kukwazi ukuzihlambulula ngokupheleleyo. Kwaye emva kwalolu hlobo lwenkqubo uya kuziva ukuba kukhanya kwaye kukhanya ngakumbi endlwini.
Yintoni enokuyenza xa umenyiwe ukutyelela?
Isipho esinobugqibeleleyo kwintombazana ngomhla
Yintoni enokunika intsha intsapho ngomnyaka omtsha?
Unokukhetha njani umlambo opheleleyo?
Mini cheesecake nge chocolate
Yimiphi imibala abantwana abathanda ukususela kwiminyaka eyi-8 ubudala?
Ukukhethwa kweempawu zomculo ezibuhlungu phantsi kwengqondo edabukisayo
Ukulala emini kwintsana
I-Chanterelles ebusika - zokupheka zokupheka - i-caviar, kwi-bhotela, edikiweyo kwi-margarine. Indlela yokwenza ityuwa kunye nokuqhwala i-chanterelles ebusika
Iingcebiso ezifanelekileyo zamantombazana
I-lubricant yamabhinqa engaqhelekanga
Ixesha le-Ski eAndorra
Kutheni umntwana ehlala ehlushwa ngumkhuhlane?
Iqabunga lamaqanda iMasala
Imithetho eyisixhenxe yabasetyhini kwi-30s yabo
Indlela yokufeza isisu esisisigxina?